२२.८ % जनसंख्याको पहुँचमा पुग्यो बीमा, प्रिमियम संकलन ३२.२ प्रतिशतले बढ्यो — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बीमा > २२.८ % जनसंख्याको पहुँचमा पुग्यो बीमा, प्रिमियम संकलन ३२.२ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्ममा २२.८ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बीमाको पहुँचमा २०.९ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै रहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गर्दा २५.२ प्रतिशत मानिस बीमाको दायरामा समावेश भएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २०.९ प्रतिशत र २३.८ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको माघ महिनासम्ममा कुल बीमालेखको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.३ प्रतिशतले बढेर ७२ लाख ४३ हजार ५ सय पुगेको छ ।
यो अवधिमा संकलन भएको बीमा प्रिमियर रकम ३२.२ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ६९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार बीमा प्रिमियम संकलनमा जीवन बीमा र निर्जीबन बीमा तर्फको हिस्सा क्रमशः ८१.८ प्रतिशत र १८.२ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७७ चैत्र ५ गते १३:५४ मा प्रकाशित
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता ७१.५ % ले बढ्यो, कुन क्षेत्रमा कति ?
ग्लोबल आइएमई बैंकमा झुम्मिए लगानीकर्ता, नेप्सेमा गिरावट आउने संकेत !
औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घमा आयो नयाँ नेतृत्व
आरजुलाई मिस नेवा उपाधि !